Ukongezwa okutsha kuthotho lopapasho lweBentley Institute: Ngaphakathi Ushicilelo lweMicrosoftStation CONNECT -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukongezwa okutsha kuthotho lwezinto zeZiko lePortugal: ngaphakathi kwi-MicroStation ConNECT Edition
AutoCAD-AutoDeskUkufundisa i-CAD / GISZobunjineliIntelliCADMicrostation-Bentley
I-EBentley Institute Press, umpapashi weencwadi zokufunda ezisemgangathweni kunye nemisebenzi yokubhekisa kwezobuchwephesha yokuqhubela phambili ubunjineli, uyilo, ulwakhiwo, imisebenzi, indawo yokuhlala kunye nemfundo, uxele ukubakho kothotho olutsha lweempapasho ezinesihloko "Ngaphakathi kwi-MicroStation CONNECT Edition" , ngoku efumaneka ngokuprinta apha nanjengencwadi ye-elektroniki ngaphakathi www.book.bentley.com
Iseti yevolumu ezintathu ijolise ekuphuhliseni ukuqonda okuqinileyo kweziseko zeMicroStation kwaye ilandele inyathelo ngenyathelo elibandakanya ukuzivocavoca kunye nemizekelo yokwenyani yehlabathi enemifanekiso. Ukupapashwa kufundisa abafundi ngendlela yokusebenzisa isiseko se-2D yoyilo lweMicroStation kwaye babeke isiseko semfundo ephezulu. Olu luhlu lunokufumaneka kwiAmazon Kindle (imiqulu I, II, kunye no-III) kunye neApple (umqulu I, II, no-III). Uluhlu lwencwadi lusebenza njengesixhobo esinamandla sokufunda kunye nesikhokelo esikhawulezayo sokukhangela abafundi, abaqalayo kunye neengcali.
Uluhlu lwencwadi lubonisa izibonelelo zokusebenzisa i-CONNECT Edition kwaye lixoxa ngeempawu zoHlelo lweMicrosoftStation CONNECT, kubandakanya amandla amatsha e-CAD kunye namandla ayo kunye nokuguquguquka ukujonga ngokuchanekileyo, imodeli, uxwebhu, kunye nokujonga uyilo olunobutyebi bolwazi lwazo zonke iintlobo nezikali. . IMicrosoftStation CONNECT Edition yenzelwe iingcali ezisebenza kumacandelo onke kwiiprojekthi zeziseko zophuhliso zazo zonke iintlobo.
“Siyavuya ukunikezela ngesihloko esimalindelwe kwiZiko leMfundo laseMexico, esiya kuthi sincede iinjineli ukuba zenze umsebenzi omkhulu ngelixa besebenza neMicroStation. Oochwephesha abavela kwi-Bentley, Samir Haque, Smrutirekha Mahapatra, kunye noShaylesh Lunawat badibanise iminyaka yabo yamava kunye nezifundo abazifundileyo ukubhala le miqulu mithathu. Ndilindele ukuba bonke abafundi bolu luhlu bazokwazi ukwandisa ulwazi lwabo lweMicroStation ConNECT Edition kwaye baphucule imisebenzi yabo ngolu setyenziso. ” UVinayak Trivedi, uSekela Mongameli kunye noMlawuli weHlabathi, kwiZiko laseBentley
Umqulu I ujolise kubasebenzisi abafuna ukwazi iziseko zesoftware kwaye ucacisa indlela yokuseka imeko yokuzoba. Umqulu II ukhokela abafundi ngenkqubo yokwenza izinto kunye nokuguqula izinto kusetyenziswa izakhono ezahlukeneyo. IVolumu III yazisa ukuhamba komsebenzi okuqhubele phambili njengokudala kunye nokubeka iiseli, ukucacisa imizobo, ukuseta izingqinisiso, ukubhala amashiti kunye nokuprinta.
USamir Haque yinjineli kunye nonjingalwazi ngeedigri zebhayoloji, biochemistry, umbane nobunjineli boqobo. Waqala kwi-CAD njengophandi e-UCLA, apho wasebenzisa khona iMicrosoftStation ukuyila iinxalenye ze-3D zovavanyo kwindawo yokuhamba ngenqwelomoya yokufundwa kwezihlunu zemisipha kunye nokufakwa kwemisipha. UHaque uphinde wasebenzisa isoftware kwimephu yobuchopho kwi-3D kwiZiko loPhando ngeBongo. Kule minyaka ingama-23 idlulileyo kunye nePortugal, iHaque iqeqeshe amawaka abasebenzisi kwiMicrosoftStation kwaye yabhala iincwadana ezininzi kwisoftware. IHaque okwangoku yongamela uphuhliso lwe-PowerPlatform, ekhokelela kulawulo lwemveliso kunye namaqela oqinisekiso lomgangatho.
UShaylesh Lunawat uzuze isidanga seBunjineli kwiDyunivesithi yasePune. Waqala umsebenzi wokukhulisa izixhobo zokhuselo, ngaphambi kokuba asebenze kuWindows ukusuka ngo-2008 ukuya ku-2019 njengomphathi wokubhala kwezobugcisa. Kwesi sikhundla, iLunawat yayinoxanduva lokuvelisa iincwadana ezincinci kwi-MicroStation kunye nezinye iinkqubo zeWindows.
USmrutirekha Mahapatra wajoyina iMicrosoft ngo-2016 njengombhali wezobuchwephesha kwaye ukhokela iqela lamaxwebhu ePowerPlatform. Ngaphambi kokujoyina iWindows, Mahapatra wayengumyili wezakhiwo kunye neefemu ezahlukeneyo kuyilo lwezakhiwo zemizi-mveliso, izakhiwo zorhwebo, kunye nezibhedlele. Ngalo lonke ixesha lomsebenzi wakhe wobugcisa, wasebenzisa izixhobo ze-CAD ezahlukeneyo ekuhanjisweni kweprojekthi. UMahapatra wafumana isidanga se-AA kulawulo lwamandla kwiZiko leKirsch lezeNdalo.
U-Esri upapasha iNcwadi yoMsebenzi kaRhulumente eSmarter nguMartin O'Malley